Saadaashayda Sannadka 2018. | Somaliland Today
← Maxaa Inagala Gudboon Arrinta Maamulka Hawadda…W/Q Liibaan Ismaaciil Buraale
“Waa Sharci Darro Dhalinyaradda Khasabka Lagaga Xiiraayo Timaha”. Dhamme →
Saadaashayda Sannadka 2018.
Sannadkii 2017 waa uu socday mana Soo laaban doono, wax badan oo laga bartay iyo dhacdooyin badan oo uu ka tagayba manta waynu haynaa. Waqti kasta oo lagu jiro wax laga qoro ayuu lee yahay. Waxaa Bilaabmaya Sannad Cusub (2018), waxaa la rajaynayaa in wax badan ay dhacaan, lama hubase in ay dhamaantood sida ay tahay u dhici doonto.
Halkan waxan kusoo koobi dhawr arrimood oo aan Filaayo inay dhici doonto sannadkan 2018.
1: Wadahadal-ka Somaliland iyo Soomaaliya: Aad baan ugu rajo weynahay in badhtamaha ama dabayaaqada Sannadka 2018 ay wadahadalii Somaliland iyo Soomaaliya ay dib u
Wadahadalkan waxaa awoodda la saari doonaa, lagana wada hadli doonaa sidii xal loogu gaadhi lahaa Maamul-ka hawada Soomaaliya iyo Somaliland. Qodobkani waxa uu noqon doonaa mid kulanka jawi halis ah galin doona muran xooganna keeni kara.
Waxaa jiri doona qodobo la isku raaci doono balse ma noqon doonaan kuwo sidaas usii buuran. Kulankuna waxaa uu kusoo dhamaan isagoo wax natiijo ah oo la mahadiyo aan laga gaadhin, dib ayaa haddana Shir kale loogu ballami.
2: Mucaarad-ka Dawladda Soomaaliya oo meel Sare gaadhi doona: Haa, dawlad aan Mucaarad lahayni dawlad maaha, sidoo kale Mucaarad wax dumi mooyee wax kale aqoon isna Mucaarad maaha!!
2018 waxaa uu u noqon doonaa Dawladda Federaal-ka Soomaaliya mid aad u adag, waxaa isa sii tari doonaa Mucaarad-ka iyagoo meel kasta fadeexad dawladda ah lasoo taagnaan doona.
Waxaa jiri doonaa Siyaasiyiin Mucaarad ah oo xabsiga la dhigo iyadoo siyaabo kale duwan loo eedayn doono. Mucaaradku kaliya kuma koobnaan doono shakhsiyaad kaliya oo Golaha Senate-ka ama Shacabka ka tirsan, waxaa jiri doona Maamulo goboleedyo hadda taageero u ah DFS balse hadhow mucaardka la soo safan doona. Maamul Goboleedyada qaar ayaa sheegi doona inay xidhiidh-ka u jareen Dawladda Federaalka Soomaaliya (DFS).
3: Mooshin-ka laga keeni dono Farmaajo oo Guul daraysan doona: Wax qariib ah ma noqon doonto in Xildhibaanada Mucaaradka ahi ay Mooshin ka keenaan madax weynaha Soomaaliya mudane Farmaajo, hore way uga dhacday dalka in Mooshin laga keeno madax weyne.
Waxa jiri doona is xulufaysi siyaasadeed oo lagu dhex arki doono Golaha Shacabka, aakhirka waxaa lagu guul daraysan doonaa in Mooshinkaasi noqdo mid hir gala.
4: Dhimashada Dadka Rayidka ah Ee Koonfurta Soomaaliya oo sii kordhi doona: Marka laga Yimaado ay ka geystaan Koonfurta Soomaaliya sida Maraykanka iyo Kenya. Dawladda Soomaliya waddamadaas si toos ah ugalama hadli doonto in ay joojiyaan dadka rayid-ka ah ee ay duqaymada ku dhamaynayaan.
5: Maraykan-ka iyo Waqooyiga Kuuriya: Labada dalba waxaa ka taliya laba nin oo midkastaba lagu tilmaamo inuu yahay macangag ( tiisa u muuqate), waxaa jiri doonta in uu maraykanku isku dayi doono inuu hawl gal ciidan ku qaado waddanka waqooyiga Kuuriya isagoo xulufaysanaya waddanka la jaarka ah ee Koonfur Kuuriya. Arrintan waxa si toos ah uga soo hor jeesan doona waddamada taageera W. Kuuriya sida China iyo Russia. Madax weynaha Maraykanka ayaa isagu dhawr jeerba hore u sheegay in hawl gal ciidan oo lagu qaado W.Kuuriya ay tahay mid lagama maarmaan ah balse waqtiga uu qaadaayo muu shaacin.
Qoraalkani waa sadaal kaliya mana ahan wax aan u hubo 100%. Waxii iman doona rabbi uun baa awood u leh inuu sii ogaado. Marka ay Saadaal tahayna macnaheedu maaha dhamaantood sida aan u sheegay ayay u wada dhici doonaan balse qaar kamid ahi wey beenoobi karaan.
Hamse Yasin Daab-Jeerin